करोड कमाउने यी मोडेलले वक्षस्थलको सुरक्षाका लागि राखिन् बडीगार्ड ! – सुदूरखबर डटकम
करोड कमाउने यी मोडेलले वक्षस्थलको सुरक्षाका लागि राखिन् बडीगार्ड !
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder August, 04 2019
एजेन्सी- अलेग्रा कोल नाम गरेकी अमेरिकाकी मोडल औधी ठूला स्तनका कारण चर्चित छिन् ।उनलाई हरेक पटक देख्नेहरुले हेरेको हेरै गर्छन् । कारण हो उनको छातीमा झुण्डिएका ५४ इन्चका ठूला स्तन ।
कार्टुनको क्यारेक्टर जेसिका र्याविट जस्तै बनाउने मुख्य इच्छा सहित स्तन मोडिफाइ गरिरहेकी अलेग्राले स्तनको आकार बढाउने चाहाना देखिएसँगै धेरै पटक शल्यक्रिया समेत गर्नुपरेको छ । आर्कषक शरीरकै कारण बार्षिक १ करोड कमाउने उनले स्तनका कारण जति नै भारी भएपनि त्यो पिडा बिर्सने गरेको एक अन्तरवार्तामा बताएकी छिन् ।
यस्तै ५० किलो तौलको वक्षस्थल भएकी अन्नी हकिन्स टर्नरले आफ्ना वक्षस्थलको सुरक्षाका लागि निजी सुरक्षागार्ड नियुक्त गरेर सबैलाई चकित तुल्याएकी छिन्। चिकित्सकहरूले भने टर्नरको स्तन यति धेरै ठूलो हुनुको कारण उनलाई गिगान्टोमास्टिया भन्ने रोग लाग्नुभएको बताएका छन्।
ठूला वक्षस्थलका कारण धेरै मानिसले आफूलाई पछ्याउने र त्यसका कारण आफू असुरक्षित भएको भन्दै टर्नरले सुरक्षागार्ड नियुक्त गरेको बताएकी छिन्।
टर्नरले ठूलो स्तनकै कारण गिनिज बुकमा नाम मात्र लेखाएकी छैनन्, ती भारी भरकम स्तनले उनलाई धेरै कामसमेत दिलाएका छन्। दुई सन्तानकी आमा ५३ वर्षीया टर्नरले आफू दसौँ लाख महिलामध्ये एक भएको कुरा सगर्व बताउने गरेकी छिन्।
चिनसँग जोडिएको गोरखामा रहेको लार्के भन्सारमा बर्षदिनमा ५ सय ७० रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन